News - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
Top5Best Laptop Brands in the World ,ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လက်တော့ပ် တံဆိပ်များ Featured
Top5Best Laptop Brands in the Worldကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လက်တော့ပ် တံဆိပ်များ 1. Apple ကမ္ဘာမှာ လူကြိုက်အများဆုံး လက်တော့ တံဆိပ်တွေထဲက အက်ပဲလ် ကတော့ ထင်ရှားလှပါတယ်။အက်ပဲလ် ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ ၊ထုတ်ကုန်တွေ ဟာ နည်းပညာလောကမှာ များပြားလွန်းပါတယ်။MacBook Pro ကတော့ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ အက်ပဲလ် ရဲ့ လက်တော့ တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။အက်ပဲလ်တံဆိပ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဟာ အာမခံချက်မြင့်မားသလို ဆော့ဝဲလ် ၊ဟက်ဝဲလ် တွေ နဲ့ အတူ သုံးစွဲ သူတွေ အတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ကမ္ဘာမှာ အက်ပဲလ် တံဆိပ်ဟာ နံပါတ် ၁ နေရာမှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ 2. Dell ဒဲလ် လက်တော့ တွေ ကတော့ လီနိုဗို လက်တော့ တွေ နဲ့ အတူ ဈေးကွက်ကို ယှဉ်ပြိုင်စဉ်တုန်းက ဒဲလ် ဟာ မော်ဒယ်မြင့် လက်တော့ မျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး လျှပ်စစ် ပါဝါစနစ်ပိုင်းအာမခံမှုတွေ နဲအတူ နောက်ဆက်တွဲနည်းပညာထောက်ပံ့မှု တွေ ကြောင့် နာမည်ပိုကြီးခဲ့ဖူးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒဲလ်ရဲ့ XPS 13 မော်ဒယ်နဲ့ အတူ ဝင်းဒိုးစနစ် တွေ ဈေးသက်သာလာပြီး ဂိမ်း လက်တော့ တွေ အတွက်လည်းအဆင်ပြေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ 3. Asus အောစု( Asus) လက်တော့ တွေကတော့ ယခု နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်မှု အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အောစု ရဲ့…
ထူးခြားသော သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်များ Featured
ထူးခြားသော သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်များ သိပ္ပံက ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အုန်းရေကို အကြောထဲထိုးသွင်းနိုင်ပြီး မိုနာလီဇာမှာ မျက်ခုံးမွှေးရှိတယ်လို့ မကြာသေးခင်ကမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ကမ္ဘာ့ကြီးက ကျနော်တို့ကို အမြဲ အံ့အားသင့်စေပါတယ် ကဲ အောက်မှာဆက်ကြည့်ရအောင် ၁။ စကြာဝဠာမှာ အအေးဆုံးနေရာက ကမ္ဘာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံက သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေက လေဆာကို အသုံးပြု၍ အက်တမ်တွေကို အေးခဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ အက်တမ်တွေကို လုံးဝသဿုံ သုညနဲ့ နီးကပ်သော အပူချိန်တခုကို ရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ၂။ အကယ်၍ ငါတို့ဟာ အက်တမ်တွေထဲက လစ်လပ်နေသော နေရာတွေကို ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူသားရင်းမြစ်တခုလုံးဟာ ပန်းသီးတလုံးအတွင်းမှာပင် ဝင်ဆံ့ပါလိမ့်မယ်။ ၃။ Raspberry ရက်စ်ဘယ်ရီသီး အရသာကို ပြုလုပ်သောဓာတုဓာတ်ပေါင်းဟာ စကြာဝဠာ အနှံံ့ အပြားမှာ ပေါများလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကြာဝဠာရဲ့ အရသာကို မြည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ရက်စ်ဘယ်ရီ အရသာ ထွက်နေပါလိမ့်မယ် ၄။ကမ္ဘာ့မှာ အချောဆုံး အရာဝတ္ထုတွေထဲက တခုကတော့ ဒူးအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ချောဆီပဲဖြစ်ပါတယ် ၅။ကမ္ဘာ့မှာ အကြီးဆုံး သက်ရှိကတော့ အမေရိကား Malheur မှာရှိတဲ့ Armillaria ostoyae ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းဟာ ၂၁၇၄ ဧကထက်ပိုကြီးပြီး အသက်ကတော့ ၂၄၀၀ရှိပါပြီ ၆။ကင်းမွန်ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ပေါင်မုန့်အကွေးနဲ့ တူပါသည် ဒါဟာ သူ့ရဲ့ အစာချေ လမ်းကြောင်းစနစ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်းမွန်ရဲ့ သဘာဝကြောင့်အစာတွေဟာ ဦးနှောက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ် အဲဒီ အခါမှာ…
လက်တွေ့ဘဝက ကြောက်မက်ဖွယ်စက်ရုပ်များ Featured
လက်တွေ့ဘဝက ကြောက်မက်ဖွယ်စက်ရုပ်များ ၂၀၁၇ခုနှစ်တုန်းက artificial intelligence ကျွမ်းကျင်သူပေါင်း ရာနဲ့ချီဟာ ဘယ်သူ့ကိုသတ်ရမလဲဆိုတာ အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ စက်ရုပ်လူသတ်သမားတွေ ဖန်တီမှုအကြောင်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တုန်းကလည်း လူသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဂရုပြုပြီးတော့ ဖန်တီးဖို့ AI ဖန်တီးသူတွေထံ အိတ်ဖွင့်စာလေးကို စတီဖင်ဟော့ကင်းနဲ့ အီလွန်မက်ခ်တို့က ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ Terminator ၊ HBO's Westworld နဲ့ ရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့ sci-fi ဇာတ်ကားတွေက ကျွန်တော်တို့ကို သတိပေးနေသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာ မေ့ပျောက်နေကြတာကများပါတယ်။ စက်ရုပ်နည်းပညာတွေက တိုးတက်မြင့်မားလာသလို အသုံးချမှုနယ်ပယ်မှာလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာတာကို ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီစာကို ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင် တံခါးကိုသေချာပိတ်ထားပြီး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကိုပလတ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ စိတ်အေးအေးနဲ့ ဖတ်လို့ရတာပေါ့။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာ ပေါင်မုန့်ကင်စက်လေးကိုတောင် သံသယဝင်သွားနိုင်သလို စက္ကူဖျက်ဆီးစက်ကိုလည်း အမြင်တွေမှားလာနိုင်ပါတယ်။ စက်ရုပ်တွေရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်တိုးတက်မှုကို ဖတ်ပြီးသွားရင် ညတောင် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်ပါဦးမလား။ အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်စေအောင် ခြောက်လှန့်မယ့်ကောင်မလေး ဒီစက်ရုပ်လေးကိုတော့ artist Jordan Wolfson က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံလေးကတော့ မိန်းမပျိုတစ်ဦးအသွင်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကိုတော့ စုန်းမပုံစံမျက်နှာဖုံးတစ်ဝက်စွပ်ပေးထားပြီး ဝတ်စုံဖြူကိုဝတ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မှန်ရှေ့မှာ pop သီချင်းတွေနဲ့ ကပြနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး “ငါ တဖြည်းဖြည်းအိုလာပြီ” “ငါဝလာပြီ” “ဘုရားသခင်ကို ငါမယုံဘူး” စတဲ့ စကားလုံးတွေကိုလည်း သင်ပေးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူ့မှာ facial recognition ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အနားမှာဖြတ်သွားတဲ့သူတိုင်းရဲ့ မျက်လုံးကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ကျောချမ်းအောင်လည်း လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒီစက်ရုပ်လေးကတော့ ကျွန်တော်ဖော်ပြမယ့်အောက်က စက်ရုပ်တွေနဲ့ ကွာခြားနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့…
စမတ်ဖုန်းနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နေ့စဉ်သုံုးကိစ္စရပ်များ Featured
စမတ်ဖုန်းနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နေ့စဉ်သုံုးကိစ္စရပ်များ စမတ်ဖုန်းတွေဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အတွက် ပစ္စည်းအတော်များများကို ဝယ်ယူရခြင်းမှ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်လေးတွေမှာ စမတ်ဖုန်းကို အထာကျကျဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ။ ဘယ်လိုလွယ်ကူအောင် လုပ်ဆောင်ကြမလဲ။ အောက်ဆုံးက ဘောနပ်စ်လေးကိုလည်း လက်လွတ်မခံနဲ့နော်။ ၁။ သင့်ကိုယ်သင် ဘေးကင်းအောင်ထားခြင်း အိမ်ကိုနောက်ကျမှပြန်လာလေ့ရှိတာမျိုးမှာ ဘေးကင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ app လေးက သင့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကို လျော့ပါးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ emergency နံပါတ်ကို မက်ဆေ့ချ်ပို့ပေးနိုင်သလို အသံနဲ့ ဗွီဒီယိုဖမ်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။ GPS location ကို ထောက်လှမ်းလို့ရတယ်။ အချိန်မီပြန်ရောက်မလာရင် သူငယ်ချင်းကို နှိုးစက်ပေးမယ့် timer တွေလည်း ရှိပါတယ်။ fake call option လေး ပါဝင်ပါသေးတယ်။Tipsဗွီဒီယိုတစ်ခုကို အရေးကြီးစီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲမှာ မျှဝေချင်တာမျိုး၊ အဘွားကို အပျော်ခရီးပုံတွေပြချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ screen mirroring app က အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ app ကိုသွင်းပြီးတော့ ဗွီဒီယို၊ သီချင်း၊ ပုံလေးတွေကို စမတ်ဖုန်းမှာ ဖွင့်လိုက်ပါ။ အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုတောင် တစ်ပြိုင်တည်း broadcast လုပ်လို့ရတယ်။ USB ကြိုးတွေမလိုအပ်ပါဘူး။ iOS ရော Android မှာပါ ရနိုင်ပါပြီ။ ၂။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း ပထမဆုံးဒိတ်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ရှာနေသလား။ တရုတ်စာလား၊ အီတလီစာလားဆိုတာ ဝေခွဲမရဘူးပေါ့။ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် ဒီလို app လေးက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ ခက်တာက App Store ပေါ်မှာ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် iOS တွေအတွက် ဆင်တူတာမျိုးကိုတော့ ရနိုင်ပါတယ်။ ၃။…
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀အတွင်း ကမ္ဘာကြီးပြိုလဲသွားနိုင်ဟု စတီဖင်ဟော့ကင်းနမိတ် နဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်စဉ်များ Featured
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀အတွင်း ကမ္ဘာကြီးပြိုလဲသွားနိုင်ဟု စတီဖင်ဟော့ကင်းနမိတ် နဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်စဉ်များ အိုင်းစတိုင်းပြီးရင် စတီဖင်ဟော့ကင်းက သူ့ရဲ့ရူပဗေဒနဲ့ စကြဝဠာအကြောင်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးလူသိများသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၈နှစ်အရွယ်မှာ စာဖတ်ဖို့သင်ယူခဲ့ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်မှာလည်း အတော်လေးပျင်းရိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၂၁အရွယ်မှာတော့ သူ့ရဲ့နာမကျန်းမှုကနေ ကမ္ဘာကြီးကိုရှုမြင်ပုံ ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ စကြဝဠာလေ့လာမှုနယ်ပယ်ကို ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့သီအိုရီတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကြဝဠာကြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို ရှင်းပြထားတာတွေ ပါ၀င်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေနဲ့ လူသားတွေအပေါ် သူ့ရဲ့အမြင်ကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ဟော့ကင်းရဲ့ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိို စုစည်းတင်ပြပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကမ္ဘာကြီးက မီးလုံးကြီးဖြစ်သွားနိုင် ဟော့ကင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြိးဟာ နှစ်ပေါင်း၆၀၀ အတွင်းမှာပဲ မီးလုံးကြီးဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲသူမှတွေက ကမ္ဘာကြီးကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး လူသားအားလုံးကို ပပျောက်သွားစေမှာပါ။ ကမ္ဘာကြီးပူလောင်မှုဟာ Venus လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အထိ ဆိုးရွားမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ Venus ရဲ့ အပူချိန်ကတော့ 250 degrees Celsius ဖြစ်ပြီးတော့ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်မိုးတွေ မကြာခဏ ရွာလေ့ရှိပါတယ်။ လေတိုက်ပြီဆိုရင်လည်း တစ်စက္ကန့်ကို ၁၀၀ မီတာနှုန်းနဲ့ပါ။ “ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုက ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့် အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်း ကာကွယ်ရမယ်အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။” ၂။ ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အခြားဂြိုလ်တစ်လုံးလိုအပ်နေ ဟော့ကင်းပြောပုံအရ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်ဂြိုလ်ကို နှစ််၁၀၀ အတွင်းမှာ ရှာရမှာပါ။ ပြန်လာလို့မရတော့လောက်အောင်ကို ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ လူဦးရေကြီးထွားခြင်းတွေ၊ ညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ တောပြုန်းခြင်းတွေ၊ ရောဂါဘယတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ ဂေဟစနစ်ကြွယ်ဝတဲ့ ကမ္ဘာသစ်တွေကို ရှာဖွေရမယ်။ဖြစ်နို်င်ချေရှိတဲ့ဂြိုလ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကမ္ဘာမြေရဲ့သဘာဝဂြိုလ်တုဖြစ်တဲ့…
အလွန်အသုံးဝင်သော စမတ်ဖုန်းလျှို့ဝှက်feature များ Featured
အလွန်အသုံးဝင်သော စမတ်ဖုန်းလျှို့ဝှက်feature များ လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်လောက်တုန်းက အလုပ်၁၀ခုလုပ်ချင်ရင် ပစ္စည်း၁၀မျိုး ရှိရတယ်။ အခုဆို စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိခြင်းက ဖုန်းခေါ်၊ စာပို့၊ တီဗွီကြည့်၊ သတင်းဖတ်၊ ငွေပေးငွေယူတွေ လုပ်နိုင်နေပါပြီ။ ဒီထက်တောင် ပိုလုပ်လို့ရတယ်။အဲဒီလိုအများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အထဲကမှ မသိကြသေးတဲ့ feature လေးတွေလည်းဖြစ်၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ feature လေးတွေကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။ ၁။ Monochrome mode ဘတ်ထရီနဲ့ မျက်လုံးကို ကာကွယ်ချင်ပါသလား။ စာဖတ်နေချိန်မှာ monochrome mode ကို အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါလား။ developer’s menu ကို သွားလိုက်ပါ။ simulate anomaly" ကို ရှာလိုက်ပါ။ ကျွန်တော့ S7 edge မှာတော့ color space ဆိုတာလေးပဲ ပါ၀င်ပါတယ်။ ရွေးစရာပိုများတာပေါ့။ အဲဒီအထဲက monochrome mode ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းလေးက ဖြူမည်းဖြစ်သွားပါပြီ။ ဗွီဒီယိုတွေကိုလည်း ဖြူမည်းပုံစံနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကတော့ အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ဒီဆယ်ချက်ထဲက သင့်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုက ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ နောက်ဆုံးတစ်ခုကို အကြွေဆုံးပါပဲ။ ၂။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများ သင်ဟာ စမတ်ဖုန်းစွဲလမ်းနေသူလို့ မိသားစုတွေ သတ်မှတ်တာခံနေရပြီလား။ သင်ဘယ်လောက်တောင် စွဲလမ်းနေပြီလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးဖို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို စစ်လိုက်ရအောင်။ iOS မှာတော့ “Settings“ — ”Battery" ကို သွားပြီးတော့ “last7days” ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အသုံးအများဆုံး app တွေ…
ဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်ကွန်ပျူတာကြား အချက်အလက်တွေ ကူးပြောငး်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ Featured
ဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်ကွန်ပျူတာကြား အချက်အလက်တွေ ကူးပြောငး်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ယခုလမ်းညွှန်လေးကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်ကွန်ပျူတာကြား သတင်းအချက်အလက်များ မည်သို့အပေးအယူပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကို ဖော်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) : Android USB ကိုအသုံးပြုခြင်း • သင့်ကွန်ပျူတာ၏ USB Port သို့ သင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန် Data Cable (ဒေတာ USB ကြိုး) ကိုအသုံးပြုပါ။ သင့်ထံတွင်ထိုကဲ့သို့သောကြိုးမရှိပါက ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀က်ဆိုက်သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး တစ်နေရာရာမှ ထိုကြိုးတစ်ချောင်းဝယ်ယူလိုက်ပါ။• သင့်ဖုန်းတွင် Memory Card ရှိနေပါစေ။• သင့်ဖုန်းဖန်သားပြင်မှ USB Connected ဖြစ်ကြောင်းပြသည့် Notification လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။• Mount ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ• သင့်ကွန်ပျူတာတွင် Removable Storage ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ သင်ဟာ Macbook အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက သင့်ကွန်ပျူတာ Desktop တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီး PC တစ်လုံးတွင်ဆိုပါက My Computer တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။• သင့်ဖုန်းမှ ကွန်ပျူတာထဲသို့ရွေ့ပြောင်းလိုသည့်အချက်အလက်များကိုဆွဲယူထည့်သွင်းလိုက်ပါ။• အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါက ဖုန်းရှိ Notification bar သို့ပြန်သွားပြီး Turn Off USB Storage ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။• သင့်ဖုန်းမှကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ထားသည့် Data Cable ကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ နည်းလမ်း (၂) : iPhone Wifi Sync ကိုအသုံးပြုခြင်း သင်ဟာ iOS 5.0 နှင့်အထက်ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်ပါက iTunes Synch ကိုအသုံးပြုပြီး Wifi မှတဆင့် အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက် လွဲပြောင်းပေးပို့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ၊ သံစဉ်တွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့ Application များကို သင့်ကွန်ပျူတာမှချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ရက်တွင်ချိတ်ဆက်လိုက်သည့်အချိန်တိုင်း အလိုလျောက်…
အွန်လိုင်းပေါ်က သင့်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ပုံတွေ ကို ကာကွယ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းပေါင်းချုပ် Featured
အွန်လိုင်းပေါ်ကသင့်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ပုံတွေကို ကာကွယ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းပေါင်းချုပ် အင်တာနက်ခေတ်ကိုရောက်တာတဲ့အချိန်မှာ ဓါတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ talent ကိုပြသနိုင်တဲ့ ရွှေရောင် platform ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း အထိခိုက်လွယ်ဆုံး platformလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာပဲ သူတို့ရဲ့အနုပညာတွေကို ခိုးယူသွားလို့ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ပုံအတွက် မူပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခြင်းက တရားမဝင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှည်လျားလှတဲ့ တရားခွင်က အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အနုပညာတွေကို ချပြနေတဲ့သူတွေကို သူခိုးတွေက ခြိမ်းခြောက်နိုင်နေကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ၁။ အဆင့်မြင့် ဘားကုဒ်များကိုအသုံးပြုခြင်း Digimarc ကတော့ မမြင်နိုင်တဲ့ ဘားကုဒ်တွေကို သင့်ရဲ့ပုံလေးတွေအတွင်းကို ထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ ပုံမှာ လက်ဗွေရာထည့်လိုက်သမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းလိုက်လို့လွယ်တာပေါ့။ ပန်းချီကားနဲ့ ဓါတ်ပုံရဲ့ ကွာခြားချက်တစ်ခုကတော့ ဓါတ်ပုံက softcopy ဖြစ်လို့ ကြိုက်တဲ့သူက ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးတော့ ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ပိုင်ရှင်က သင်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြသနို်င်ပါတယ်။ ၂။ ရေစာထည့်ခြင်း ဒီအချက်ကတော့ သူခိုးကိုအလွယ်တကူဟန့်တားနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲ။ စာသား၊ လိုဂိုလေးတွေကို ထောင့်နားလေးမှာ ထည့်လိုက်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းက သင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြသနိုင်တဲ့အပြင် သူခိုးတွေကိုလည်း တွန့်ဆုတ်သွားစေပါတယ်။ Photoshop ၊ Adobe Lightroom ကို အသုံးပြုပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာမတင်ခင် ရေစာထည့်နိုင်ပါတယ်။ ၃။ Resolution နည်းတဲ့ပုံရိပ်များတင်ခြင်း Resolution ကောင်းလေလေ အန္တရာယ်များလေလေပါပဲ။ thumbnail လောက်လေးကိုအသုံးပြုခြင်းသာမက သာမန်တင်ခြင်းအတွက်လည်း နည်းဗျူဟာတွေချမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ resolution နည်းတဲ့ပုံတစ်ခုအဖြစ်…
Gadgets များကို သက်တမ်းတိုအောင်လုပ်မိနေသလား Featured
Gadgets များကို သက်တမ်းတိုအောင်လုပ်မိနေသလား မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ gadget တွေက ၀ယ်ပြီးနှစ်ဝက်လောက်ပဲ သုံးလို့ကောင်းနေသလား။ အများစုကတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ အပြစ်တင်ရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းတွေကို ကောင်းကောင်းမှ ဂရုမစိုက်တတ်တာ။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သင့်ရဲ့တက်ဘလက်၊ စမတ်ဖုန်း၊ laptop ကို အချိန်ကြာကြာ ကောင်းကောင်းလေး အသုံးပြုနို်င်အောင် ကူညီပေးမှာပါ။ ဘက််ထရီကိုအားသွင်းခြင်း ခေတ်သစ် lithium-ion နဲ့ lithium-polymer ဘက််ထရီ တွေက memory effect မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နဲ့ laptop တွေက သုညအထိကျမသွားစေဘဲ အားသွင်းလို့ရနေတာပါ။ ဒါကြောင် ့ထုတ်လုပ်သူတွေက ဘက််ထရီ ရဲ့သက်တမ်းကို အားလုံးဝပျက်သွားတဲ့ စက်ဝန်းနဲ့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ပုံမှန်အရတော့ စက်ဝန်းက ၄၀၀-၆၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် gadget ရဲ့ ဘက််ထရီ သက်တမ်းကို တိုးမြင့်စေချင်တယတ်ဆိုရင်တော့ မကြာခဏ အားသွင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဘတ်ထရီကိို ၁၀-၂၀% အထိရောက်ချိန်တိုင်းမှာ အားသွင်းပေးပါ။ ဒါကတော့ စက်ဝန်းကို ၁၀၀၀-၁၁၀၀ အထိ တိုးမြှင့်စေပါတယ်။ ခေတ်သစ် ဘက််ထရီ တွေက အားပြည့်နေချိန်မှာ မဖြုတ်ဘဲ ဘာမှသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ အတွင်းမှာပါ၀င်တဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာလေးက လျှပ်စစ်စီးမှုကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘက််ထရီ အားလွန်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဆက်မပြတ်အားသွင်းလို့ မပြောဘူးနော်။ ၄၀-၈၀% အထိပဲ အားသွင်းခြင်းက ဘက််ထရီ ကို ကြာကြာခံစေပါတယ်။ စျေးပေါတဲ့ ဘက််ထရီ…
အသက်ရှိသော တက်တူးလေး Featured
အသက်ရှိသော တက်တူးလေး တက်တူးဆိုတာ ဘာကြီးလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ မှင်နဲ့ဆွဲသားတဲ့ အနုပညာတစ်မျိုးပါပဲ။ လူတွေက ဒီဇိုင်းရှာပြီးတော့ သူတို့အတွက် ရုပ်ဆိုးဆိုးအပ်တွေနဲ့ ပုံဖြစ်အောင်ဆွဲပေးမယ့်သူဆီကို သွားကြတယ်။ နှစ်တွေကြာလာတော့ အရောင်တွေမှိန်လာပြီးတော့ ရောကုန်တယ်။ မကြာသေးခင်က တက်တူးထိုးတဲ့ခေတ်ထလိုက်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကယ်ဖို့အတွက် တက်တူးတွေကို အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားလိုက်ကြတယ်။ အံံ့သြစရာပဲ။ ဘယ်လိုများပါလိမ့်နော်။ နည်းပညာက ထူးခြားပါတယ်။ MIT university မှ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဖွဲ့က 3D printing နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ stimuli မျိုးစုံကို တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ အသက်ရှိတက်တူးဖြစ်အောင် ဆဲလ်တွေကိုမျိုးရိုးဗီဇပြင်လိုက်ကြပါတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ နားကိုမလည်တော့ဘူးဖြစ်နေလား။ တက်တူးတွေဟာ ထိုးထားတဲ့သူဘေးနားမှာရှိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာတွေကို တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ယာယီတက်တူးလေးတွေကို အသက်ရှိတဲ့ဆဲလ်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ prototype လေးတွေကိုကြည့်ရတာတော့ သစ်ပင်အကိုင်းအခက်လေးတွေအတိုင်းပါပဲ။ ယာယီတက်တူးလေးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် သဘာဝအတိုင်း ဆွဲဆန့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်လောက်စွဲနေပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကို ခံစားပေးနိုင်မှာပါ။ သုတေသီတွေဟာ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ဆဲလ်နဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနည်းပညာကို ခံနိုင်ရည်မရှိတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ 3D-printing လုပ်ချိန်မှာ ခံနိုင်ရည်မရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ UV နဲ့ထိတွေ့မှုက သူတို့ကို သေဆုံးသွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘတ်တီးရီးယားတွေကို အသုံးပြုတာပါ။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ဖိအားတွေကိုခံနိုင်တယ်။ အရေပြားနဲ့လည်း အလွယ်တကူတွယ်ငြိနိုင်ပါတယ်။ ဘတ်တီးရီးယားတွေရဲ့ဆဲလ်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ ဆဲလ်တွေအသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့အတွက် မင်ရည်၊ ဆဲလ်၊ အာဟာရတွေကိုပါ ဆက်လက်တီထွင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကို အသက်ရှိတက်တူးလေးအသွင် သရုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပါးလွှာပြီးတော့ ထွင်းဖောက်မြင်နေရတဲ့ pattern လေးတွေက သစ်ပင်အကိုင်းအခက်လေးတွေလိုပါပဲ။ သစ်ပင်ရဲ့…